Rasaasa News – Atoobiya oo Bilowday Boobka Khayraadka Ogadeniya
Atoobiya oo Bilowday Boobka Khayraadka Ogadeniya
on June 26, 2014 2:00 am
Jijiga, June 26, 2014 – Degaanka Somalida Ogadeeniya oo ah dhul dihin oo uu ka buuxo khayraad dabiici ah oo muuqda iyo mid aan muuqan, ayeyna ka faa,iidaysan karin dadka u dhashay khayraadka.
Gumaysiga Atobiya wuxuu maskaxda ka curyaanshay dadka Somalida Ogadeeniya, kuwaas oo laggala dagaalamay ganacsiga iyo aqoonta la xidhiidha nolosha horumarkeeda. Laguna kalifay in ay noqdaan dad gooman oo xoolo dhaqato ah.
Waxaa muuqata maanta in Atobiya ay ku guulaysatay qorshihii ay waligeed ku waday dhulka Somalida Ogadeeniya. Ayna socoto maanta “wanka macasha iiqabo, minidana adigu mari, aana aan dhiiga muudsado.”
Sidaas darteed bay mudnaatay maanta in maalqabeenada Atobiya u soo tafo xaytaan ka qaybgalka boobka iyo ka faa,iidaysiga khayraadka cidlada yaal ee Somalida Ogadeniya, inta ka hadha dawlada Atobiya.
Tan iyo sanadkii 2012-kii waxaa warqada ruqsada dhoofinta ama ka faa,iidaysiga khayraadka degaanka Somalida Ogadeeniya la siiyey in ka badan todoba  shirkadood oo laga leeyahay buuraleyda Atobiya.
Shirkadahani waxay si dadban u dhoofiyaan xabagta, fooxa, malabka, xoolaha nool, hargaha, dhuxusha, cusbada dabiiciga ah, daawada dhirta dabiiciga ah, macdanta qaaliga ah iyo wax soo saarka beeraha. Meesha ay shirkado Atobiyan ah saamilay kula noqdeen shirkado shisheeya oo baadhay shidaalka iyo dahabka Ogaden. Kuwaas oo dilaalnimo ku hela malaayiin Dollarka Maraykanka sida shirkada Tigray Resources oo shaldhigeedu yahay dalka Canada, kuna jirta noocyo badan oo dilaalnimo ah.
Shirkada ugu wayn ee ka faa,iidaysanaya khayraadka Ogaden waa shirkada gawrac iyo dhoofinta xoolaha nool “Ethiopia’s Meat and Live Animal Export” oo xarunteedu tahay Bahar Dar iyo shirkad laga leeyahay Hindia oo la yidhaahdo Allana Group oo hada uun maalgashi ku samaysatay Atobiya.
Shirkadan ayaa maalgashatay aduun lacageed oo dhan USD 20 million, iyada oo ay dawladu ka siisay dhul 75 Hectre ah, dhul beer u dhaw magaalada Ziway ee Oromada.
Dawlada Atobiya ayaa qorshaynaysa in ay ka hesho dakhli dhan USD 47.48 milyan iibka xoolaha nool ee Somalida Ogadeniya, isla sanadkan gudhiisa kolka ay shirkadani bilowdo dhoofinta xoolaha nool.
Dalabka hilibka xoolaha nool ayaa ka imanaya dalalka Carabta, oo ay xili dhaw uun dawlada Atobiya kala sixiixdeen heshiis ah in ay buuxiso booskii ay Somaliya ku lahaan jirtay siinta xoolaha nool. Sidaas waxaa sheegay Abebaw Mekonnen oo ah xoghayaha guud ee iskaashatada dhoofinta hilibka xoolaha.